Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Taleb Rifai any Syria dia manampy amin'ny famoahana indray ny fizahantany
Home » Travel Associations News » Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Taleb Rifai any Syria dia manampy amin'ny famoahana indray ny fizahantany
Ny minisitry ny fizahan-tany Syriana Bishr Yazigi dia nihaona tamin'ny Alahady ny sekretera jeneralin'ny fikambanana fizahan-tany (UNWTO) Taleb Rifai sy ny delegasiona miaraka aminy.
Nilaza i Yazigi fa ny dingana ho avy mikasika ny indostrian'ny fizahan-tany dia tokony hifantoka amin'ny "ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ara-pinoana" ho fomba iray lehibe hamelomana ireo faritra izay navotsahan'ny tafika arabo syriana tamin'ny asa fampihorohoroana.
Ny minisitra koa dia niresaka momba ny tetikasa ho avy napetraka mba hampiroboroboana ny indostrian'ny fizahantany manerana an'i Syria, ary ny filana mampiofana mpiasa manokana amin'ny fizahantany.
Ho setrin'izany, Rifai dia nanipika ny fisian'ny fotoana manan-danja amin'ny fampiasam-bola ao Syria, ary nilazany fa ilaina ny manadihady ny fomba fampidirana ny fizahantany amin'ny tontolo iainana sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Taty aoriana, Yazigi, Rifai ary ireo delegasiona niaraka dia nitsidika ny foibem-pirenena Visual Visual Arts sy toerana arkeolojika marobe tao an-tanànan'i Damasy taloha.
Syria dia mpikambana ao amin'ny UNWTO.
Ity dia iray amin'ireo dia ofisialy farany nataon'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO. Rifai, teratany jordania no hanome ny foiben'ny fikambananany Zurab Pololikashvili avy any Georgia tamin'ny 1 Janoary.
Tsy misy Sleigh sy Reindeer ho an'i Santa Claus ao amin'ny Resort Maui: Ary ahoana ny amin'ireo ankizy?